AHITSIO VOLUME CONTROL NIRAIKITRA TEO AMIN'NY ZORO AMBONY HAVIA AMIN'NY EFIJERY - MALEFAKA
Ahitsio Volume Control niraikitra teo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery
Ahitsio Volume Control niraikitra teo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery: Olana malaza eo amin'ny vondrom-piarahamonina Windows izany izay rehefa manitsy ny boaty fanaraha-maso ny feo dia toa mijanona eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery. Ary na inona na inona tsy ho azonao atao ny manetsika an'io boaty io, dia hanjavona ho azy izany rehefa afaka segondra vitsy, na amin'ny toe-javatra sasany dia tsy hisy izany. Raha vantany vao tafahitsoka ny baoritra volume dia tsy afaka manokatra programa hafa ianao mandra-panjavona indray ilay boaty. Raha tsy levona ny fanaraha-maso ny feo rehefa afaka segondra vitsy dia ny hany vahaolana azo atao dia ny mamerina ny rafitrao fa na dia aorian'izany aza dia toa tsy miala izany.
Ny olana lehibe dia ny tsy ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny zavatra hafa raha tsy manjavona ny baoritra volume ary amin'ny tranga izay tsy hanjavona ho azy dia mivaingana ny rafitra satria tsy misy na inona na inona azon'ny mpampiasa atao hamahana ilay olana. Raha ny marina dia tsy misy antony fantatra izay toa miteraka ity olana ity fa taorian'ny fikarohana be dia be, toa misy fifandirana eo amin'ny fanaraha-maso ny feo amin'ny fitaovana sy ny mpamily audio Windows. Koa raha tsy mandany fotoana dia andeha hojerentsika ny fomba fanamboarana ny Volume Control mipetaka eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery miaraka amin'ny fanampian'ny torolàlana famahana olana eto ambany.
Fomba 1: Fanavaozana ny Sound Drivers
Fomba 2: Manaova baoty madio
Fomba 3: Esory ny Sound Drivers
Fomba 4: Hanova ny fotoana fampahafantarana
Fomba 5: Manaova Windows Audio Troubleshooter
1. Tsindrio Windows Key + R dia soraty ny ' Devmgmt.msc ' ary tsindrio ny Enter hanokatra Device Manager.
2. Expand Sound, video, ary lalao controllers ary tsindrio havanana amin'ny anao Fitaovana Audio dia fidio Tadiavo (Raha efa afaka dia tsidiho ity dingana ity).
2. Raha efa afaka ny fitaovana audio dia tsindrio havanana amin'ny anao Fitaovana Audio dia fidio Update Driver Software.
3. Fidio izao Mikaroka ho azy ny rindrambaiko mpamily nohavaozina ary avelao ny dingana ho vita.
4. Raha tsy afaka manavao ny mpamily Audio ianao dia mifidiana indray Update Driver Software.
5. Amin'ity indray mitoraka ity mifidy Tsidiho ny solosiko ho an'ny rindrambaiko mpamily.
6. Manaraka, safidio Avelao aho hisafidy amin'ny lisitry ny mpamily fitaovana amin'ny solosiko.
7. Safidio ny mpamily mety amin'ny lisitra ary tsindrio Manaraka.
8. Avelao ny dingana vita ary avereno indray ny PC-nao.
9. Raha tsy izany, mandehana any amin'ny anao tranokalan'ny mpanamboatra ary misintona ny mpamily farany.
Azonao atao ny mametraka ny solosainao amin'ny toetry ny boot madio ary jereo raha mitranga ilay olana na tsia. Mety misy ny mety hisian'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo mifanipaka ka mahatonga ny olana.
1. Tsindrio ny Windows Key + R bokotra, dia soraty 'msconfig' ary tsindrio OK.
2.Eo ambanin'ny tabilao General etsy ambany, ataovy azo antoka 'Fitomboana voafantina' dia voamarina.
3. Esory ny marika 'Ampidiro ny entana fanombohana ' eo ambanin'ny fanombohana voafidy.
4. Safidio ny tabilao serivisy ary jereo ny boaty ‘Afeno ny tolotra Microsoft rehetra.’
5. Tsindrio izao 'Atsaharo ny rehetra' hanafoana ny serivisy tsy ilaina rehetra izay mety hiteraka fifandirana.
6. Ao amin'ny tabilao Startup, tsindrio ‘Sokafy ny Task Manager.’
7. Ankehitriny ao amin'ny Kiheba fanombohana (Inside Task Manager) disable daholo ireo singa fanombohana izay alefa.
8. Tsindrio OK ary avy eo Haverina velomina. Ary jereo raha azonao atao Ahitsio Volume Control niraikitra teo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery.
9. Tsindrio indray ny Windows key + R bokotra sy karazana 'msconfig' ary tsindrio OK.
10. Ao amin'ny tabilao General, safidio ny Normal Startup safidy ary tsindrio OK avy eo.
11. Rehefa asaina mamerina ny solosaina ianao, tsindrio Restart.
1. Tsindrio Windows Key + R dia soraty devmgmt.msc ary tsindrio ny enter raha hanokatra Mpitantana Fitaovana.
2. Manitatra Mpanara-maso feo, horonan-tsary ary lalao ary tsindrio ny fitaovana fanamafisam-peo dia fidio Esory ny fametrahana.
3. Ankehitriny manamarina ny fanesorana amin'ny fipihana OK.
4. Farany, ao amin'ny Device Manager varavarankely, mandehana Action ary tsindrio eo Scan ny fanovana fitaovana.
5. Avereno indray ny fampiharana fanovana ary jereo raha afaka manao izany ianao Ahitsio Volume Control niraikitra teo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery.
1.Press Windows Key + I hanokatra Settings dia tsindrio Mora ny fidirana.
2. Tsindrio indray izao avy amin'ny sakafo ankavia mifidy Safidy hafa.
3. Ambany Asehoy ny fampandrenesana ho an'ny fidina midina voafantina 5 segondra , raha efa napetraka ho 5 izy dia ovay ho 7 segondra.
4. Avereno indray ny PC mba hitahiry ny fanovana.
1. Sokafy ny tontonana fanaraha-maso ary ao amin'ny karazana boaty fikarohana Fanamboarana.
2. Ao amin'ny valin'ny fikarohana tsindrio eo Fanamboarana ary mifidiana Hardware sy Feo.
3. Ankehitriny ao amin'ny varavarankely manaraka tsindrio eo Milalao Audio ao anatin'ny sokajy Soro.
4. Farany, tsindrio Advanced Options ao amin'ny varavarankely Playing Audio ary jereo Ampiharo ny fanamboarana ho azy ary tsindrio Manaraka.
5.Troubleshooter dia hamantatra ho azy ny olana ary hanontany anao raha te hampihatra ny fanamboarana ianao na tsia.
6. Tsindrio Apply this fix and Reboot hampihatra fanovana.
Soso-kevitra ho anao:
Fix Wallpaper miova ho azy rehefa manomboka ny solosaina
Fix error 0x80080207 rehefa mametraka App avy amin'ny Windows Store
Ahoana ny fanamboarana Windows Defender tsy manomboka
Fix Tsy afaka mametraka Network Adapter Error Code 28
Izany no fahombiazanao Ahitsio Volume Control niraikitra teo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery fa raha mbola manana fanontaniana momba ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.